Apple inotangisa yechina yeruzhinji beta ye macOS Yakakwira Sierra uye tvOS 11 | Ndinobva mac
Zuva mushure mekutanga kwe beta kune vanogadzira ese macOS High Sierra uye tvOS, vakomana vanobva kuCupertino vakaburitsa inoenderana yeruzhinji vhezheni yeaya, kunyange kuverenga kwacho kusiri kwakafanana. Ino nguva Apple yaburitsa yechina beta ye macOS High Sierra, nepo iyo vhezheni yevagadziri iri nhamba 5. Iyi nyowani vhezheni. Iyo inotevera vhezheni yeanoshanda sisitimu yeMac makomputa inotipa isu seyakakurisa utsva iyo nyowani APFS (Apple File Sisitimu) faira system, Metal 2, kuvandudzwa muMail application, Mifananidzo, Safari ... Apple yakaburitsawo vhezheni itsva yeanoshanda system yeApple TV.
Pane ino nguva, Apple yatanga beta yechina yeTVOS 11, nepo beta iripo kune vanogadzira iri nhamba shanu, beta yakabuda mazuva mashoma apfuura. Kunge macOS vhezheni, vakomana vanobva kuCupertino havana kuwedzera chero chinhu chitsva chinomira kupfuura izvo zvakaziviswa mune yakakosha yakaitwa munaJune 5 kumusangano wevagadziri wakaitirwa muSan José uye kupi Apple yakaunza vhezheni nyowani dzese mashandiro esisitimu yezvigadzirwa zvayo.
Pakati pezvinhu zvitsva zvinofanirwa kuverengerwa muTVOS, zvinoratidzira mukana wekushandisa maAirPods otomatiki pasina kuabatanidza kare, nekuti kuwiriranisa kwayo kunoitwa kuburikidza neICloud, chiri icho chete chishandiso icho nhasi chaive chisingaenderane zvakananga neApple's wireless headphones. Chimwe chinhu chitsva chinowanikwa muAmazon Prime Vhidhiyo application, application iyo kusvika parizvino yanga isingawanikwe yeApple TV, nekuda kwematambudziko ari pakati peApple neAmazon, matambudziko akazogadziriswa nenzira ine hushamwari iyo inobvumidza Apple kudzoka kuzotengesa Apple TV kune internet kutengesa hofori Amazon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Apple inotangisa yechina macOS Yakakwira Sierra uye tvOS 11 yeruzhinji beta